Akụkọ - Anyị na-elekwasị anya na iwuli mmụọ elu otu elu
Ningbo Zodi bara uru na-ewulite mmụọ mmụọ dị elu .Anyị mere njem ụbọchị abụọ na mpaghara Maoyang, Xiangshan na Ọgọstụ 20, n'oge ụbọchị anyị nwere obi ụtọ na mmiri na mmiri na-egwu mmiri. Were ezumike gị n'ọrụ gị iji nwee udo nke ọdịdị. Anyị na-anọrọ ụbọchị niile site n'ụtụtụ rue abalị na ndị ọrụ ibe na ezinụlọ, na-enwe ndụ obi ụtọ n'akụkụ ọrụ。
Otu aka, otu ga-ekerịta ihe ọmụma dị iche iche maka ndị ọrụ niile na-eji PPT na ihe ngosi gosipụtara, kpọọkwa ndị ọkachamara ụlọ ọrụ iji welie ozi ndị ọzọ (gụnyere ihe onwunwe, usoro mmepụta, teknụzụ mmepụta, usoro nnwale, ọgwụgwọ elu, mbukota, nnyefe, ọnụahịa wdg. N'oge na-egosi ụfọdụ, ọ na-eme ka ahụmịhe ọkachamara anyị mara ma melite ntụkwasị obi anyị nwere.
A nabatara ebe niile na ịrụ ọrụ n'adabereghị na ya nwere uru pụtara ìhè na ọ nwere ike igosipụta ikike mmadụ. Agbanyeghị, ekwenyere m na ịrụkọ ọrụ ọnụ dị mkpa na ọha mmadụ nke oge a na otu sprit abụrụla àgwà achọrọ site na ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Nke mbu, anyi no n'ime obodo ndi mmadu nwere mgbagwoju anya ma anyi na enwe nsogbu ndi siri ike karie ike anyi. Ọ kachasị n'oge a na-arụkọ ọrụ ọnụ na-egosi na ọ dị oke mkpa. Site n'enyemaka nke otu, a ga-edozi nsogbu ndị a ngwa ngwa na ngwa ngwa, nke nwere ike melite arụmọrụ ọrụ.
N'okwu nke abụọ, ịrụkọ ọrụ ọnụ na-enye ohere iji kwado onye ọrụ ibe ya, ọ ga-eme ka ọrụ ọrụ dị ụtọ na nke na-atọ ụtọ, nke bụ ihe dị mkpa na-emetụta nkwenye ndị ọrụ na ụlọ ọrụ dịka ezigbo ebe ọrụ.
N'ikpeazụ, ịrụkọ ọrụ ọnụ na-atụnye ụtụ n'ọganihu nke ụlọ ọrụ ndị ahụ. Ebe ihe omuma ndi oru ibe ha gbakwunyere, ulo oru ndi a nwere oru oma na ike iji dozie nsogbu obula. N'ihi ya, ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere ike ịbawanye uru ma mepee ngwa ngwa.
Na nchikota, imekọ ihe ọnụ dị ezigbo mkpa, ọ dịghị onye nwere ike ibi ndụ n'otu n'otu, ha ga-atụkwasị ndị ọzọ obi n'ụzọ ụfọdụ. N'ihi ya, ịrụkọ ọrụ ọnụ nwere ike ime ka ndụ dịkwuo mfe. Iji gboo mkpa nke ma mmụba nke onwe na nke ọkaibe. Anyị kwesịrị ịmụta ịdị na-arụkọ ọrụ ọnụ ma na-emegharịrịta ibe anyị. ọha mmadụ.